बढी राहत चाहिए धेरै कर तिर्नूस्, नत्र कहाँबाट ल्याएर राहत दिनु ? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठराजनीतिबढी राहत चाहिए धेरै कर तिर्नूस्, नत्र कहाँबाट ल्याएर राहत दिनु ?
बढी राहत चाहिए धेरै कर तिर्नूस्, नत्र कहाँबाट ल्याएर राहत दिनु ?
२४ बैशाख २०७७, बुधबार १५:४५ प्रकाशित
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले व्यवसायी तथा अन्य क्षेत्रलाई सरकारले धेरै राहत दिन नसक्ने बताएका छन्। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उनले को;रोना भाइरसले छटपटाएका व्यवसायी तथा अन्य क्षेत्रलाई सरकारले धेरै राहत दिन नसक्ने स्पष्ट परेका हुन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले गोर्खापत्रसँगको अन्तर्वार्तामा को;रोना भाइरसको समस्या सरकारले ननिम्त्याएका कारण त्यसको सम्पूर्ण भार सरकारले मात्रै व्यहोर्न नसक्ने बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रले पनि त्यसको भारको हिस्सा व्यहोर्नुपर्ने बताए । ‘को;रनोको समस्या सरकारले सिर्जना गरेको समस्या होइन, त्यसको सम्पूर्ण भार सरकारले मात्रै व्यहोर्न सक्दैन,’ मन्त्री खतिवडाले भनेका छन्, ‘हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकार स्रोत होइन, परिचालक हो, वितरक हो ।
जुन क्षेत्रलाई जति बढी राहत दिनुपर्ने हो, त्यति नै बराबरको रकम कहीँबाट परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको स्रोत संकलनको मूख्य स्रोत भनेको राजस्व हो, त्यो बढाउनुपर्ने हुन्छ।’ मन्त्री खतिवडाले बढी राहत चाहिए धेरै कर तिर्न तयार रहनुपर्ने पनि बताएका छन् । निजी क्षेत्रले एक आपसमा मिलेर सहयोग आदानप्रदान गरे सरकारलाई राहत दिनुपर्ने बोझ नहुने पनि उक्त अन्तवार्तामा बताएका छन् । यो समाचार अर्थसरोकारवाट साभार गरिएको हो ।